Waxaan Noqon Lahaa Dhamaantiin Qiimaha Jaban ee Maanta, Qiimo Jaban ee ... | Martech Zone
Waxaan Noqon Lahaa Dhamaantiin Qiimaha Jaban ee Maanta, Qiimaha Jaban ee…
Axad, Abriil 29, 2007 Isniin, Janaayo 1, 2018 Douglas Karr
Waxyaabaha ku jira boggeygu si gaar ah uma xoog badneyn usbuucii la soo dhaafay - waan ka xumahay haddii midkiin uu niyad jabo. Waxaan si aad ah ugu mashquulsanaa sameynta codsiyo faro ku tiris ah oo guriga yaal. Waxa aanan ka samaysanayn nuxurka, waxaan rajaynayaa inaan ku soo daro qaar ka mid ah waxyaabaha la isku shubo. Shaqada, waxaan u diyaar garoobeynaa soo deyn weyn oo softiweer ah waxaanan heystaa mashruuc mudaaharaad ah kaas oo bixin doona qaab lagu iskudaysto qaar ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan. Wax badan ayaa miisaamaya guushayda waxaanan haystaa ilo dhaqaale oo aan ku dhammeeyo markaa waa caqabad.
Dhammaan mashaariicdu si wanaagsan ayey u socdaan oo waxaan la kulmi doonaa waqtiyada kama dambaysta ah, waxay qaadaneysaa toddobaadyo shaqo oo culus. Sidoo kale, waxaan dib-u-qiimeynayaa shaqadeyda waqtiga-buuxa waxaanan si taxaddar leh u tixgelinayaa mustaqbalkeyga halkaas waxaana ku miisaamayaa fursado xoog leh oo dibadda ah. Waad neceb tahay inaad ka tagto shaqo-bixiye weyn, laakiin mararka qaarkood shaqadu waa inay hoos ugu dhacdo dhaqaalaha fudud. Ma jecli inaan fiiro gaar ah u yeesho lacagta markay tahay shaqo, laakiin waxaan la shaqeynayay anigoo rajeynaya inaan la qabsado dakhligeyga dhowr sano ka hor markii aan la tashanayay. Waxaa cadaatay inaysan taasi dhici doonin hadaan sii joogo. Aniga oo wiil bilaabay Jaamacad dayrta, waa inaan wax ka beddelo oo aan si dhakhso leh u sameeyo.
Waan jeclahay isbadalka waana ku faraxsanahay fursadahayga. Waxaan ku sigtay inaan baxo bilow ah dhawr bilood ka hor, laakiin waqtigu sax ma ahayn. Waxay umuuqataa mid quruxsan, hadda. Dad yar ayaa dib u cusbooneysiin kara dib-u-bilaabiddooda inay ka caawiyeen shirkadaha ka socda Jasiiradda Vancouver ilaa Iceland ilaa Australia inay hirgeliyaan ujeeddooyinka istiraatiijiyadeed ee suuq-geynta internetka, is-dhexgalka, iyo otomaatiga. Macaamiishaydu waxay ka mid ahaayeen kuwa ugu waaweyn adduunka, oo ay ku jiraan Indianapolis Colts, Home Depot, United Airlines, Icelandair, Liberty Mutual, Goodyear, Hotels.com, AG Edwards, iyo shirkado kale oo horumarineed iyo hay'ado u dhexeeya. Intaas ka hor, waxaan u dhisay wargeys weyn wargeys malaayiin doolar si toos ah loogu diro. Guushu waxay dhistaa kalsooni, sidaa darteed kalsooni weyn ayaan ku qabaa inaan leexan karo shirkad kasta markay tahay Suuqgeynta iyo Teknolojiyada.
Aniga oo ah La-Taliyaha Is-dhexgalka iyo Maareeyaha Wax soo saarka, mas'uuliyadaydu waxay noqotay la-tashiga ganacsiyada, tilmaamidda fursadaha, iyo fulinta xalka ku habboon ee iyaga u gaarka ah. Mas'uuliyadayda hadda jirta waxay diiradda saareysaa u hoggaansamida CAN-SPAM, Naqshadeynta Wajahadda Isticmaalaha, Helitaanka, Isticmaalka, API iyo muujinta horumarka. Waxaan sidoo kale sifiican uyaqaanaa Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed, Falanqaynta iyo Mashiinka Raadinta. Heck, xitaa waxaan ku helay magacayga daabacaadda sanadkan qaar ka mid ah gudbinta aan sameeyay Buugga Chris Baggott, Suuqgeynta Emailka ee Lambarada.
Waxaan rajaynayaa inaan sii wado shaqadan noocan ah - iyada oo loo marayo shirkaddayda la talinta ama iyada oo loo marayo jagada Agaasimaha / Fulinta ee shirkad kale. Sidoo kale waan xiiseynayaa waqti dheer xiriirka qandaraaska. Riyo rumowday waxay noqoneysaa inaan markale la tashado shirkadayda. Kama tagi karo Indianapolis - caruurtaydu halkan way ku jecel yihiin waxayna ku nool yihiin meel u dhow Hooyadood. Markaa haddii ay jirto fursad lagu shaqeysiiyo meelaha fog fog, intaas oo dhan ayaan sidoo kale u ahay. Waxaan rajeynayaa inaan ku quusto madaxa ugu horreeya qaar ka mid ah caqabadaha cusub, laga yaabee inay ku fiicnaato Mashiinka Raadinta. Waxaan ku soo qaatay natiijooyin cajiib ah boggan waana ogahay inaan wax kale u qaban karo.
Oh… waligayna iskama dhiibi doono baloogga! 😉
Tags: douglas karrraadinayamaareeyaha wax soo saarka
5 Talooyin Naxdin Leh Oo Laba Jibaaraya Wax Soo Saarkaaga
Wacyigelinta Blogging ee Guy Kawasaki
Apr 30, 2007 at 7: 12 AM
Way fiicantahay in la helo dhowr waxyaalood oo tijaabin ah. Dhowr bilood ka hor waxaa la ii soo bandhigay 100K in aan ka shaqeeyo hal sano Qatar, oo ah dal yar oo ka baxsan Ciraaq, aniga oo ah maamule shabakadeed.
Taasi waxay jeclaan laheyd dalab duufaan ah aniga 8 sano ka hor, laakiin hadda xaas iyo wiil 9 jir ah, ma awoodi kartid; halkan ha iga soo saarin haddii aad isku daydo!
Apr 30, 2007 at 4: 27 PM
Waxaan ka tagay shaqaalaynta buuxda 3 bilood ka hor si aan u unko shirkad cusub, waligayna ma dareemin tamar sidaas 🙂 maxaa yeelay xor baan u ahay inaan ka shaqeeyo waxa aan jeclahay (xadka qaarkood!) Waxaan ahay hal abuur ka badan sidii aan waligay ahaa.
Waxaan heystaa faa'iidada lammaanaha keena lacag caddaan ah oo igu filan si aan shirkadda iyo annagaba aan u sii wadno taas oo caawinaysa!
Oh, oo ma u cuntami weyday cidda aad u shaqayso hadda inay aqriyaan Douggan oo aad la yaabban tahay waxa socda? 🙂
Maadaama aad tahay saaxiib shaqsiyan ah oo wanaagsan, waxaan noqon doonaa mid waxoogaa dhaliil ah halkan oo booskaaga galiya qaybta “hawada wasakhda wasakhda ah” ka sii daa dadweynaha. Inbadan oo naga mid ah waxay badanaa ku dhaleeceeyaan ciyaartooyda xirfadleyda ah inay sameeyaan hadalka noocan ah (tusaale, Terrell Owens, Randy Moss). In kasta oo ay run tahay inay sii wadaan inay shaqaaleeyaan dad kale laguna bogaadiyo shaqooyin xiiso leh shaqooyinkooda, haddana dabeecaddoodu aad bay u xumaataa muddo ka dib.
Wow, taasi xaqiiqdii ma ahayn ujeedka boostada, Randy. Xaqiiqdii, ma haysto wax aan ka ahayn waxyaabo wanaagsan oo aan ka iraahdo cidda aan u shaqeeyo hadda. Ma jiro 'dhar wasaq ah oo wasakh ah' boostada gabi ahaanba. Wali waan ku qanacsanahay iyaga waxaanan u maleynayaa inay yihiin kuwii ugu fiicnaa ee aan abid u shaqeeyo.
Tani ma ahayn boostada loo riixay si uun si loo sumcad xumeeyo cidda aan u shaqeeyo hadda ama hawo wasakhda wasakhda leh - waa qoraal 'lagu tijaabiyo biyaha' loona arko fursadaha halkaas ka jiri kara oo aanan ka warqabin. Waxaan gaarayaa isgoyska noloshayda oo hadafyadaydu aysan u dhigmin fursadaha shaqo ee aan haatan haysto. Taasi waa sida ugu fudud ee aan u dhigi karo.
Waxaan ka jeclaan lahaa inaan furfurnaado oo aan daacad ka ahaado hamigayga halkii aan afkayga ka xidhi lahaa. Waxaa jira kuwa u maleynaya inaadan waxba dhihin oo aad si fudud albaabka uga baxdo. Waxaan aad uga taxaddaraa shirkaddan inaan taas sameeyo. Waa inay garwaaqsadaan waxay baahiyadaydu yihiin waana inaan aqoonsadaa waxay baahiyahoodu yihiin. Haddii ciyaar jirto, waan ku jiraa! Haddii kale, waa inaan horey ugu sii socdaa noloshayda.
Mar labaad… ma jiraan 'dhar wasaq ah' oo laga hadlo.
Tijaabada biyuhu way fiican tahay. Haysashada loo-shaqeeyaha hadda jira oo ku ogaanaya waxa ku qoran boostada… ma fiicna… laakiin, waxaan qiyaasayaa inaad horeyba waxoogaa wada hadal ah ula yeelatay iyaga iyo wixii intaa ka dambeeya oo aan aniga ahayn shaqadayda
Haddii aad u baahato xoogaa caawinaad waqti dhiman ah, ii soo sheeg.
Ma aaminsani inaysan jirin wax la yaab leh oo dhinacooda ah - laakiin waxaa jira xoogaa walaac ah. Marwalba waxaan ahaa qof furfuran oo daacad ah waxaanan muddo joogay. Qoraalkani wuxuu yimaadaa oo keliya kadib bilo dood iyo go'aan qaadasho ah.
Dabcan, baloog garaynta waxay keeneysaa aragti gebi ahaanba cusub xaalad sidan oo kale ah. Ma ahan wax aad ka eegi karto buugga maamulka, taasi waa hubaal! Waan ka shaqeyneynaa, in kastoo.